मेयरज्यू ! ब्युटी पार्लर उद्घाटन गरेर स्मार्टसिटी बन्छ ?
नेपालको अत्यन्तै रमणीय स्थानकारूपमा पोखरा परिचित छ । भौगोलिक हिसाबले देशकै ठूलो महानगर पोखरा प्रदेश ४ को निर्विकल्प राजधानी पनि हो ।
पोखरामा हुने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक गतिविधिले समग्र प्रदेशमा प्रभाव पर्छ । पोखराको बहुपरिचाय छ । पोखरा पर्यटन, कला, साहित्य तथा खेलकुदको हब बन्दैछ ।
वि.सं. २०५२ माघ १८ गते उपमहानगरपालिका घोषित भएको पोखरालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वि.सं. २०७३ फागुन २७ गते महानगरपालिका घोषणा गरेको थियो । यस महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४६४.२४ वर्ग कि.मी. रहेको छ भने कूल जनसंख्या ४,१४,१४१ रहेको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरमा ३३ वटा वडाहरू छन् । वर्तमान समयमा पोखरा लेखनाथ महानगरको निर्वाचित मेयर मानबहादुर जिसी हुनुहुन्छ ।
पोखरा नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य हो । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पोखराले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई बराबरी लोभ्याउँछ । यस्तो पर्यावरणलाई भावी पुस्तासम्म जस्ताको तस्तै सम्पन गर्नका निम्ति आजैबाट हरेक पोखरेली नागरिक सचेत हुनु आवश्यक छ ।
पोखराको प्रत्येक घरको छतबाट हिमाल देखिन्छ । नयाँ पाहुना पोखरा आउँदा हामीले दिने पहिलो कोशेली अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायत हिमश्रृंखलाको आँगनमा बसेको महसुस गराउने हो । यद्यपि महानगरको ११ तलासम्म घर बनाउन पाउने पछिल्लो निर्णयले पोखराको पर्यावरणमा टेवा पुर्यापउँदैन । यसले पर्यटनमा घाटा पुर्‍याउनेवाला छ ।
पोखरालाई पर्यटन हबकारूपमा विकास गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । पर्यटन प्रवर्द्धनले नै पोखरा स्वतः विजनेस सेन्टर बन्दछ । निजीकरणलाई प्राथमिकता दिनु राज्य बलियो बनाउने विधि पटक्कै होइन । त्यो सकारात्मक कामको शुरुवात पनि होइन ।
पोखरा महानगरभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य भइरहेको छ । विमानस्थल निर्माण कार्यमा विलम्ब भइरहेको छ । सामरिक महत्त्व राख्ने संरचनामा चासो दिनुभन्दा महानगर साना व्यापारीका चटपटे दोकान बन्द गर्न लागिपरेको छ । अर्कोतर्फ मेयरज्यूबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा ठूला व्यापारीले गरेको कमाउधन्दाबारे आवाज उठ्दैन ।
स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार हुँदा पोखरा महानगरका मेयर जिसीले स्मार्ट शहर निर्माणका लागि प्रतिवद्धता पत्रमार्फत् आफ्ना योजना सार्वजनिक गरेका थिए । स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य, आधुनिक विद्युत प्रणाली, सफा र फराकिलो सडक, तालहरूको संरक्षण, बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, पोखराको पर्यावरण संरक्षण, वृद्ध भत्ता वृद्धि, द्रुत गतिमा विमानस्थल निर्माण, देशभित्रै रोजगारी र सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा लगायतमुख्य योजना थिए । निर्वाचित भएपछि वृद्धभत्तासम्बन्धी वाचा पूरा गर्न जिसीले पहल गरे पनि अन्य कुरामा उल्लेख्य पहल भएको देखिँदैन ।
मेयरज्यूबाट शुरुवातमा नयाँ र सृजनशील कामको अपेक्षा पोखरेली जनताले गर्नु स्वाभाविक हो । शपथ ग्रहणलगत्तै मेयर जिसीको पहिलो निर्णय वृद्धभत्ता बढाउने थियो, तर त्यो अहिलेसम्म अलपत्र नै छ । महानगरको कार्यालय सार्ने योजना पनि कुहिरोको काग बनिरहेको छ । स्वच्छ खानेपानीको योजना स्थानीय माइन्यूटमा सिमित बनेको छ । घरको धारामा आइहाले पनि धमिलो पानी आउँछ, त्यो पनि हप्ता दिनमा एकपटक । आईटीमय पोखरा बनाउने योजना घोषणा पत्रबाट व्यवहारमा कहिले आउँछ टुंगो छैन । घोषणापत्र फटाफट बन्ने, तर काम कहिल्यै नहुने प्रवृत्ति वामपन्थी नेताको प्रवृत्ति हुँदै होइन ।
मेयरज्यूले मध्यरातमा नेपालका प्रथम शहीद लखन थापाको शालिक फाल्नुभयो । बिहान गल्ती स्वीकार गर्दै उक्त ठाउँमा पुन: लखन थापाको शालिक स्थापना गरियो । पोखराका अन्य चोकमा शालिकहरू जस्ताको तस्तै छन् । अन्य शालिकले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या निम्त्याएका थिए, तर लखन थापाको शालिक मेयरज्यूको आँखाको कसिंगर बन्यो ।
पोखरामा धेरै समुदायको बसोबास छ । पोखरा महानगरकी उपमेयर मञ्जु गुरुङज्यूले फिर्के खोला मिचेर निर्माण भएको समाज घरमा सरकारको ढुकुटीको पैसा दिनु कति वैज्ञानिक हुन्छ ?
पोखरामा आधुनिक सुविधा सम्पन्न बसपार्कको आवश्यकता छ । जथाभावी यातायात पार्किङ पनि मुख्य समस्या बनिरहेको छ । पोखराको बसपार्कलाई कामको प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
अर्कोतर्फ मुख्य बजारबाहेक कतिपय ठाउँका सडक र नहरहरू भत्केका छन् । कहिलेकाहीँ सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुको लास भ्वाङमा भेटिन्छन् । मेयरज्यू ! यस्तो अवस्थामा फाटेका सडकहरू टालटुल गर्नु दीर्घकालीन निकास होइन भन्ने कहिले थाहा पाउने ?
फेवाताल अतिक्रमण बढ्दैछ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप फेवाताल वरिपरि अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू भत्काउनु पर्छ । पोखरा र लेखनाथ क्षेत्रका तालहरू संरक्षणमा महानगर उदासिन हुनु हुँदैन । तालहरू संरक्षणमा संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ । मेयर, उपमेयरहरू सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षामा मौन हुनुहुँदैन ।
यो एक वर्षको अवधिमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा ठूला परियोजनाका काम शुरुवात भएनन् । मेयरज्यूबाट रिबन काट्ने, किताब विमोचन गर्ने, ब्युटीपार्लर उद्घाटन गर्ने मात्र काम भयो ।
यीनै कामलाई लिएर नगरसभामा विपक्षीले गरेको विरोधलाई दोष लगाउँदै काम गर्न दिएनन् भन्नुको अर्थ केही छैन । मेयरज्यूलाई महानगर बैठकमा असहज अवस्था पनि छैन, किनकी उहाँको पार्टीले बहुमत वडामा विजय हासिल गरेको छ । यस्तो अवस्थामा समृद्ध पोखरा बनाउन मेयरज्यूमा मात्र सृजनशीलता आवश्यक छ ।
देशमा गणतन्त्र आएपश्चात भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित मेयर मानबहादुर जिसीलाई अवसर र चुनौती दुवै छन् ।
प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सुशासनयुक्त समृद्ध पोखरा महानगर निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।